DHL varotra (e-commerce): maro isafidianana any Angletera sy Etazonia | NewsMada
DHL varotra (e-commerce): maro isafidianana any Angletera sy Etazonia
Par Taratra sur 24/06/2019
Nivoatra haingana ny fividianana entana amina tambajotra serasera an’ny DHL aty Afrika (DHL Africa e-commerce), tato anatin’ny fito herinandro. Raha nahomby ny fandehan’ny varotra tamina firenena afrikanina 11, napetraky ny DHL Express indray io karazam-barotra io amin’ny firenena sivy hafa aty amin’ny tapany atsimon’i Afrika, anisan’izany i Madagasikara, miampy an’i Cameroun, Congo (RDC), Côte d’Ivoire, Gabon, Gambie, Mozambique, Tanzanie, ary Zambie.
« Mitombo isa hatrany ny mampiasa io tambajotra io, noho ny fahitanay izay fitombony haingana izay sy ny valiny mahafa-po avy amin’ny mpanjifa, nahatonga anay niditra amin’izao dingana vaovao izao », hoy i Myria Leung Chi Yuen, talen’ny varotra ao amin’ny DHL eto Madagasikara.
Nohamafisiny fa tombontsoan’ny mpanjifa malagasy sy vahiny ny fisian’io tambajotra eo amin’ny varotra io. Karazany maro ireo entana azo isafidianana amin’ny tranombarotra maherin’ny 200 any Angletera sy Etazonia, voamarin’ny DHL sy manatitra izany anatin’ny fotoana fohy any amin’izay tompony.
Ho tafakatra 50 % ny varotra amin‘ny alalan’ny “e-commerce” aty Afrika mialoha ny taona 2025, amin’ny sokajin’ny mpanjifa antoniny, raha ny fahitana ny fahamaroan’ny finday “smartphones” aty Afrika. Mora ny mampiasa izany ary haingana, tsy manahirana, indrindra vahaolana iray iadiana amin’ny hosoka, raha ny fanazavan’ny DHL Africa.